Fantaro ny momba ny Xperia Z5, Z5 compact ary ny Z5 premium | Androidsis
Manuel Ramirez | | IFA, Sony
Raha tsy maintsy niandry ny Xperia Z5 isika hatramin'ny nanombohany herintaona lasa izay, ny Xperia Z3 dia natao ho antony telo tsara: ny Xperia Z5 tenany, ny Xperia Z5 compact ary ny Xperia Z5 premium. Telefaona telo tonga hihinana ny zava-drehetra ary manandrana ny ho fialan-tsiny tonga lafatra ho an'ny karazana mpampiasa mitady farany ambony manolo-tena amin'ny fahazoana ny iray amin'izy ireo.
Ny fanamafisana ny Xperia Z3 sy Xperia Z3 compact teo aloha, dia mieritreritra fa ireo mpampiasa izay efa nandalo fotoana farany tamin'ny andiany Xperia, azo antoka fa rehefa fantatr'izy ireo fa hiditra amin'ny fakantsary misy autofocus haingana indrindra eto ambonin'ny planeta izy ireo. , sensor an'ny dian-tànana ho zava-baovao sy roa andro iainana bateriaIzy ireo dia efa hanapotika ny piggy banky hiandry ny fisian'ny iray amin'ireo telefaona telo ireo.
2 Sony Xperia Z5 compact
3 Sony Xperia Z5 Premium
Manaraka ny tsipika mitovy amin'ny famolavolana Avy amin'ny fanontana teo aloha niaraka tamin'io lamina OmniBalance io, ny Z5 dia miavaka amin'ny vatana tokana miaraka amina endrika madio sy mafy tsy misy mampiavaka azy amin'ny Xperia Z3. Fototra vy ary somary boribory eo amin'ny zorony, ohatrinona miaraka amin'ny lakilen'ny fakantsary, miakatra sy midina ny bokotra ary ny bokotra herinaratra. Tohizo ny fanoherana ny rano sy ny vovoka IP65 / 68.
Ireo mari-pahaizana momba ny fitaovana dia mandeha amin'ny alàlan'ny a 1080 x 1920 vahaolana amin'ny hakitroka pixel 423. Ao amin'ny tsinay dia manana chip Qualcomm Snapdragon 64 miorina amin'ny 810 octa-core misy cores Cortex A57 miisa efatra sy cores Cortex A53 efatra hafa.
Ao amin'ny ampahany fahatsiarovana ananany 3GB ary inona no ho 32GB ho an'ny fitehirizana anatiny izay azo hitarina amin'ny karatra micro SD. Android 5.1 dia ny kinova Android amin'ny rindrambaiko miaraka amin'ny interface UI an'ny Sony.
La mandeha mankany amin'ny 2900 mAh ny bateria izay midika fa mahatratra bateria roa andro, ka io dia telefaona irin'ny mpampiasa maro noho io antony io.
Ao amin'ny faritra fakana sary, fakan-tsary 23 MP miaraka amin'ny sensor 1/2,3 ″ Exmor RS avy amin'i Sony, raha eo aloha dia manana MP 5 miaraka amin'ny sensor Exmor R sy zoro 25mm. Ny zavatra manokana momba ny fakan-tsary any aoriana dia izy io miaraka amin'ny autofocus haingana indrindra manerantany miaraka amin'ny 0.03 segondra, 5x Clear Zoom, ISO hatramin'ny 12800 ho an'ny sary ary ny iSO3200 ho an'ny horonan-tsary, ny fiasa Steady Shot ary ny fandraisam-peo video 4K.
Telefaona iray misy fotony ary efijery kely noho ny dimy santimetatra na lehibe kokoa io. Ka eo alohan'ny telefaona iray isika izay vitantsika tsara izany ary izany ho an'ny mpampiasa sasany ity maxim ity dia azo antoka fa iray amin'ireo kalitao lehibe andrasana aminy, ankoatry ny androm-piainany.
Efijery LCD IPS LCD 4,6 miaraka amin'ny vahaolana 720 x 1280, puce Snapdragon 810 misy RAM 2GB, fitehirizana 32GB azo alefa amin'ny alàlan'ny micro SD, fakan-tsary 23 MP Sony Exmor RS ao aoriana ary 5MP eo aloha. Ny rindrambaiko dia Android 5.1 sy bateria 2700 mAh, izay hanome anao ny hery rehetra hitazomana azy roa andro amin'ny androm-piainany.
Raha fintinina, miaraka amin'ny ny fiasa rehetra an'ny Xperia Z5 Miaraka amin'ny fahasamihafana eo amin'ny refin'ny efijery, ny famahana ary ny bateria, dia hanana izany fakan-tsary 23 MP izany ianao miaraka amin'ny 0,03 fanamafisam-peo faharoa sy ny fifandraisana 4G LTE.
Ny tsy nampoizina tamin'ireo fitaovana telo ireo dia ny fampidirana sensor ho an'ny rantsantanana.
Sony dia nanambara ny telefaona voalohany misy efijery 4K. Raha nisalasala hitondra ny famahana ny QuadHD izy dia lasa nizotra tamin'ny 4K tamin'ny telefaona toy ny Xperia Z5 Premium. Amin'ny fahafahanao mirakitra an-tsoratra amin'ny 4K azo antoka fa nampiasaina tanteraka ity efijery ity, na dia mbola misy fotoana aza ny atiny multimedia hanatonana ireo fanapahan-kevitra ireo.
Sarimihetsika 5,5-inch misy a firaketana amin'ny ppi misy 800+ ary ilay vahaolana 2160 x 3840 Ultra-HD 4K ho an'ny telefaona iray misy io fefy vy sy vera io izay maka ny isan-jaton'ny habakabaka avo indrindra amin'ny fisehoany. Fitaovana fakantsary ho toy ny zava-baovao amin'ny endriny roa hafa.
Ao amin'ny fitaovana mitovy amin'ilay Snapdragon 810 ihany, 3 GB RAM DDR4 ary fitehirizana anatiny 32 GB misy ny karatra micro SD. Mitohy ny fakantsary miaraka amin'io MP MP Exmor RS 23 io ao aoriana Fototra faharoa 0,03, izay haingana be.
ny sasany refin'ny 154,4 x 76,0 x 7,8 mm ho an'ny lanjan'ny 180 grama, tsy tantera-drano ary bateria lehibe kokoa noho ny 3430 izay hitazona ity telefaona 4K ity mandritra ny roa andro.
Toy ny roa hafa, tsy fantatray ny misy noho izany dia mila miandry kely isika vao afaka miditra amin'ny fividianana finday telolahy finday izay nalain'ny mpanamboatra Japoney tamin'ny satroka tamin'ity tsena IFA any Berlin ity. Betsaka ny filokana mandritry ny herintaona mandra-pahatongan'ny taranaka Xperias vaovao.
[Nohavaozina miaraka amin'ny vidiny]
Xperia Z compact: € 599
Xperia Z: € 699
Premium Xperia Z: € 799
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Ny rehetra momba ny Xperia Z5, Xperia Z5 compact ary ny Xperia Z5 premium
Afa-tsy ny sensor vaovao sy ny dian-tànana, tena tsy misy zava-baovao. nihombo ny batterie, tsy marim-pototra ny famahana, lehibe ny frame ary ny ambany tsy ampiasaina, ary lafo isan-taona ny vidiny
Sergio XD dia hoy izy:
Lazao i Samsung mba hahitana raha mihatsara izy ireo ary hihaino anao koa izy ireo. Miharatsy izy ireo ... Kely bateria, manala fanoherana, lafo kokoa, manala microsd, manamboatra ny bateria, ...
Valiny tamin'i Sergio Xd
Mbola mila mahafantatra ny vidiny
hydrogène dia hoy izy:
Ao amin'ny pejy Sony ny vidiny
Ireo modely telo avy
Valiny amin'ny Hydrogen
Misaotra Hidrogen, manavao ny fidirana aho!
Fahafahana | Xperia Z5 Compact (Septambra), Xperia Z5 (Oktobra) ary Xperia Z5 Premium (Novambra)
mauroblim dia hoy izy:
Fa raha telefaona misy endriny izy io, ratsy kokoa noho ny HTC sy ny famolavolana fotoana betsaka kokoa noho ny HTC ONE, ary avy eo mbola te-hitsikera an'i Samsung izy ireo fa mitovy ihany izy ireo
Mamaly an'i mauroblim